६० भन्दा बढी पटक चितुवासँग भिडिसकेका घर्ती आफैं चितुवा म्यान बने ! - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २५ जेष्ठ २०७३, मंगलवार १५:३२ |
काठमाडौं । काठमाडौंकै घरहरुमा चितुवा पसेकोे घटनाहरुमा पछिल्लो समय वृद्धि हुँदै गएको छ । चितुवा जस्तो मांशहरी र हिंस्रक जनवार शहर वस्तीमा पस्न थालेपछि सर्वसाधारणहरुमा त्रास फैलनु अस्वभाविक होइन । यस्तो अवस्थामा ती चितुवाहरु समात्न सबैभन्दा सम्झिने नाम हुन्–राधाकृष्ण घर्ती । पेशाले पशु चिकित्सक घर्ती प्रहरीको सहयोगमा चितुवालाई पक्रने र जंगल पु¥याउने जोखिमपूर्ण काम गर्नमा माहिर मानिन्छन् । पत्रकार योगेन्द्र तामाङ लेख्छन् :
ललितपुर गोदावरीका राधाकृष्ण घर्ती जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानाका पशुचिकित्सक हुन् । उनले विगत २८ वर्षमा काठमाडौं शहरमा मात्रै करिब ४५ देखि ६० वटा चितुवाहरु समातेका छन् । अघिल्लो बर्ष मात्रै ५ वटा चितुवालाई उनले समाते । घर्तीले राजधानीमा मात्रै नभई अन्य जिल्लामा पनि डरलाग्दा जनवारहरु समातेका छन । यसका लागि सबैभन्दा पहिले उनी बन्दुकको सहायतामा सही निसाना लगाई डाइलाइटिन र केटालिन औषधिको सिरिन्ज प्रयोग गरि जनावरलाई बेहोस बनाउँछन् । सही निशानामा लागेकोे १० मिनेटपछि मात्रै चितुवा समाउन सम्भव हुने उनको अनुभव छ ।
पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै शहरमा चितुवा पस्ने गरेको घट्ना स्वभाविक लाग्न छोडेको छ उनलाई । चितुवालाई केही सौखिन मानिसहरुले घरमै पाल्ने गरेको र पछि नसकिनेस्थिति भएपछि खुल्ला छोड्ने गरेको हुनसक्ने घर्तीको आशंका छ । अनुमतीविना जंगलका पशुपंक्षीहरु पाल्नु गैरकानूनी हो । कुनै पनि हिंस्रक जनवार पालेको भेटिएमा पशुपंक्षी ऐन अनुसार जेल जान सक्ने र कडा कारबाही हुनसक्ने व्यवस्था रहेको घर्तीले बताए । तर यसको अनुगमन हुन नसक्दा बेलाबखत शहरमा चितुवा आतंक देखिने गरेको उनी बताउँछन् ।
Previousबोर गर्नु भो अम्बर सर !
Nextअबको एक दशकभित्र काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल सेवा शुरु हुने
जापानले बनायो स्मार्ट अण्डरवेयर
२४ पुष २०७२, शुक्रबार १३:५७